Doorashada Israel: Shan arimood oo mudan in la ogaado - BBC News Somali
Doorashada Israel: Shan arimood oo mudan in la ogaado
Iyada oo la tiriyey badi codadkii laga dhiibtay doorashada, ayaa ra'isal wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, ay u badantahay inuu dhigo rikoodh oo uu mar shanaad xilka ku guulaysto.
Waxa jira hadaba shan arinmood oo ay tahay in la ogaado marka laga hadlayo doorashada Israel.
1 Waa doorashadii aadka la isugu dhawaaday ee Israel ka dhacda muddo sannado ah
Benjamin Netanyahau waxa uu u tartamayaa xafiiska markii shanaad. Hadii mar kale la doorto, waxa uu dhaafi doonaa aasaasihii Israel David Ben-Gurion oo ahaa ra'isal wasaarihii ugu mudada dheeraa.
Hase ahaatee Netanyahu waxa la soo dersay eedo culus oo musuqmaasuq ah iyo dacwad maxkamadda uu kaga oogay xeer-ilaaliyaha guud iyo ninka tartanka adag kula jira markii u horraysay muddo sannado ah Benny Gantz.
Gantz oo ahaan jiray taliyha ciidamada Israel oo siyaasadda ku cusub ayaa Netanyahu tartanka adag kula galaya nabadgelyada oo ah arimaha ugu muhiimsan ee doorsahada, waxaanu ballan qaadayaa siyaasad nadiif ah.
Xuska Sanadguuradii koowaad ee dibadbaxyada Qaza iyo rabshado horleh oo ka dhashay
Isbahaysigiisa siyaasaddiisu tahay ta dhexe ee magaciisa la yidhaa Buluug iyo Caddaan ayaa waxay laba sannadood ka hor wada samaysteen taliyeyaal milatari oo hore iyo weriye TV oo siyaasi isku rogay oo la yidhaa Yair Lapid, waxaanu markii hore in yar ka aqlabiyad badnaa xisbiga Netanyahu ee Likud marka la eego ra'yiga dadweynaha in kasta oo ay xaaladdu haatan is bedeshay.
Tartanka ugu adag ee socdaa waxa uu keenayaa olole kulul oo la is aflagaadaynayo mararka qaarkood sumcadda la iska abbaarayo. Codbixiyeyaasha Israel ayey u badantahay in ay taageeradooda ay soo jiidato shaqsiyadda musharaxiintu oo aanay eegin siyaasadahooda iyo in ay u arkaan inuu qofkaasi yahay hogaamiye xooggan iyo in kale.
2 Hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badani lagama yaabo inuu noqdo ra'isal wasaare
Xisbi Israeli ahi keli ahaan abidkii kuma guulaysan aqlabiyada kuraasta baarlamanka, dalkaasna waxa had iyo goor ka talin jiray xukuumado wadaag ah.
Taa macnaheedu waxa weeyi in ra'isal wasaaruhu aanu had iyo goor noqon qofka xisbiga ugu kuraasta badan hogaamiya, laakiin waxa uu noqdaa qofka ku guulaysta inuu isku keeno xisbiyo wadarta kuraasta ay ka helaan noqon karto 61 ka mid ah 120 kursi ee baarlamanka Israel ee Knesset.
Ra'iy ururin la sameeyey ayaa qaarkood waxay sheegayaan in Netanyahu kaga awood badanyahay Gantz kasbashada ibahaysiga maadaama oo ra'isal wasaaruhu xidhiidh fiican la leeyahay xisbiyada kale ee midigta iyo kuwa diinta.
Tallaabo aad loogu dhalillay ayaa Netanyahu ku suurto geliyey heshiis u fududaynaya musharaxiintaa midigta fog in ay samaystan xisbi xag jir midigta ah taas oo dad badani u arkaan in ay cusnuriyiini baarlamanka ku soo gelayaan.
3 Qorsheyaal heshiis nabadeed lagula geliyo Falastiiniyiinta ayaan aad uga muuqan ololaha
Todobaadadii u dambeeyey ayaa waxa jiray xiisad sii korodhay oo dhex taal Israel iyo miditiinta Falastiiniyiinta Qasa, waxaana madaxweynaha Maraykanka Donald Turmp la filayaa inuu shaaciyo qorshahiisa uu ku xalinayo khilaafka mudada dheer ee Israel iyo Falastiiniyiinta.
Hase yeeshee qorshaha lagu doonayo in dib loogu bilaabo geedi socodka nabadda fadhiidka noqday ayaan meel wayn kaga jirin doodaha doorshada. Shacabka Israel rajo badan kama qabaan aragtida dunida ee nabadda ee ah xal laba dawladood ah.
Xubno magac leh oo ka tirsan xukuumadda garabka midig ee wadaaga ah ee Netanyahu ayaa si cad uga soo horjeeda in la dhiso dawlad Falastiiniyiintu leeyihiin waxaanay doonayaan in dhul badan oo Daanta Galbeed ee la haysto ah Israel lagu daro.
Isbahaysiga Buluug yo Caddaan wuxa uu ololahiiisu ku tibaaxay in ay kala soocmaan Falastiinyiinta laakiin si toos ah uma ay sheegin sida ay dawlad ku yeelan karaan.
Waxa kale oo uu taageersanyahay Quddus "mid ah" oo caasimad u noqota Israel in kasta oo Falastiiniyiintu ku doodaan in dhanka bari ee magaaladu noqoto caasimadooda mustaqbalka.
Benny Gantz isbahaysigiisu waxa uu sidoo kale ku baaqay in uu sii jiro maamulka Israel ee dooxada Urdun iyo degaamada Yuhuudda ee Daanta Galbeed. Degsiimooyinkaas oo sharciga caalamiga ahi ku tilmaamo kuwo sharci darro ah in kasta oo Israel diidantahay.
Xisbiga Shaqaalaha Israel oo heshiis nabadeed la saxeexday Falastiiniyiinta sannadihii 1990 ayaa codbixiyayaashu aanay danaynayn.
4 Taranka ayaa door muhiima ku leh doorshada
Waxa codbixinta isku diiwaan geliyey 6.3 qof oo Israeli-yiin ah, ururada bulsho, kuwa isir iyo diimeed ee ay ka tirsanyihiin ayaa iyadna ah arin muhiima oo saamayn ku leh sida natiijadu noqonayso.
Dadka Israeli-yiinta ah ee ka tirsan urur diimeedka Haredi ayaa tiradoodu tahay milyan iyo dheeraad. Sida caadiga ahna Yuhuudda xag jirka ah ee ka soo jeeda Yurub iyo kuwa Bariga ka soo jeeda ayaa waxa siday u codaynayaan kula taliya wadaadada inta badanna xisbiyo gaar ah ayay codkooda siiyaan.
Hase yeeshee, qaar badan oo dadkaa ka mid ah ayaa imika waxay u codeeyaan xisbiyada waaweyn gaar ahaan kuwa Midigta. Arimaha badanaa iyaga u muhiimka ah waxa ka mida in dadka qasab loogu qoro ciidanka, taas oo la filayo in baarlamaanka cusubi ka hadli doono.
Carabta Israelayaa iyaguna waxay yihiin qaybta shannaad ee bulshada, laakiin tiro koobyo ayaa sheegaya in kala badh tirada dadkooda codka bixin karaa ay codeeyaan.
Tirada codbixiyeyaasha Carabta ayaa kordhay sannadkii 2015-kii markii ay afar xisbi oo dalka ka jiraa soo sharraxeen musharaxiin ay ku midaysan yihiin oo Carab ah waxaanay markaa heleen 13 kursi, laakiin doorashadan imika arintaas kama jirto.
5 Hogaamiyaha xisbi yar ayaa laga yaabaa in cidduu raacaa guulaysato
Hogaamiyaha waddaniyaddu madax martay ee xisbiga Zehut, Moshe Feiglin, ayaa ay dhici kartaa inuu noqdo ninka guushu gacantiisa ku jirto marka ay bilaabmaan wada xaajoodyada is bahaysigu, maadaama oo saadaashu sheegayso inuu xisbigiisu heli doono ugu yaraan afar kursi.
Feiglin ayaa sheegay in aanu kala jeclayn Benjamin Netanyahu iyo Benny Gantz kii noqonaya ra'isal wasaare.
Fieglin waxa lagu yaqaan inuu u ololeeyo in la sharciyeeyo xashiishadda laakiin xisbigiisu wuxuu leeyahay aragti siyaasadeed oo doorasho.
Wuxu mowqif xag jir ah ka taaganyahay Falastiiniyiinta waxaanu doonayaa in la ogolaysiiyo in ay Daanta Galbeed ka guuraan oo iskugu tagaan Qasa.
Waxa uu sidoo kale ku baaqaa in macbad saddexaad oo Yuhuuddu leedahay laga dhiso goobta la isku haysto ee ku taal Quddus ee Yuhuuddu u yaqaanaan Temple Mount Muslimiintuna Xaram Al-Shariif oo ah goobta uu ku yaal masaajidka Al-Aqsa.